ARCHIVE, BLOG, MARKET WATCH, SHARE MARKET, SPECIAL » लगानीकर्ताले यी कुरा नबुझे, अनभिज्ञताले 'जोखिम' निम्त्याउला, बजारले 'बहुला' बनाउला...
नवराज घिमिरे , लगानीकर्ता / विश्लेषक
सेयर बजारवाट अरुले नाफा लिएको देख्दा र सुन्दा लाग्छ कि पैसा बनाउन सजिलै रहेछ । तर यहाँ घाटा खाने सम्भावना असाध्यै धेरै हुन्छ । योपनि यउटा व्यापार हो । व्यापार गर्दा नाफा घाटा दुवै हुन्छ । कमाउने र गुमाउने दुवै किसिमका सम्भावना बोकेका लगानीकर्ता यस वजारमापनि हुन्छन् ।
धेरै नयाँ लगानीकर्ताले अरुलाई सोधेर लगानी गर्छन् । अरुवाट सल्लाह लिन्छन् । यसरी अरुसँग सल्लाह लिनु र पाउनु राम्रो हो तर पाएको सल्लाह कस्तो हो भनेर छुट्याउन सकिएन भने सेयर बजारवाट सोर्है आना घाटा खाने सम्भावना हुन्छ । अज्ञानताका कारण आफुले पाएको सल्लाह गलत हो वा सहि हो छुट्याउन सक्दैनन । अन्ततगत्व उनीहरु कम्पनी र वजारवाट सिर्जित जोखिमका साथै आफैले सिर्जना गरेको जोखिमको सिकार बन्छन् ।
मानिस जन्मँदा कोहिपनि महिनौसम्म हाँसेर वस्दैनन्, महिनौ खुशिका साथ हर्सोल्लास मनाई रहदैनन् । तर मानिस मर्दा वर्षौसम्म दु:खित भइरहन्छन । त्यसैले लगानी गर्नुभन्दा पहिला नाफाको भन्दा सयौं गुणा बढी नोक्सानीको बारेमा विचार गरेर लगानी गर्नुपर्छ । लगानी गर्नुअघि नोक्सानी हुने कारण हरुको र नोक्सानी कम गर्ने उपाय हरुको वारेमा अध्यायन गर्नु पर्छ ।
तर हाम्रो बानी कस्तो छ भने सुरुमै नाफाको कुरा गर्छौ । कसैले लगानीको प्रस्तव गरे नाफा कति आउछ भनेर सोध्छौ । योनै लगानीको गलत सुरुआत हो भन्ने मेरो विश्लेषण छ । लगानी गर्नुअघि हामिले के भए नोक्सान हुन सक्छ ! नोक्सानी लाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ ! र , तिनका उपाय हरु के के हुन सक्छन भन्ने लेखाजोखा गर्न जरुरी हुन्छ ।
सेयरमा नोक्सानी भए मानसिक र पारिवारिक दुवै खाले असरहरु व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । मानसिक असरले शरिरमा विभिन्न रोग निम्तिने खतरा हुन्छ भने पारिवारिक असरले परिवारमाझै झगडा हुने , मतभेद हुने , परिवारका अन्य सदश्यले भिन्न कोणवाट हेर्नेसम्म हुन्छ । यो हामि बीचको सामाजिक यथार्थ हो । यसैले लगानीकर्ताले लगानीसँगै आफुले लिन सक्ने जोखिमको सिमी तय गरेर लगानी गर्नु उपयूक्त हुन्छ ।
आर्थात लगानी गर्नु अघिनै नोक्सान वहन गर्न सक्ने सिमाबारे विचार गर्नुपर्छ । मैले विभिन्न ठाउमा (फोरम हरुमा) भन्दै आएको के हो भने हल्लाको पछाडी दौडेर लगानी गर्नु हुँदैन । अध्यायन र सुझवुझको साथ लगानी गर्नुपर्छ । अन्तत : अध्यायन र विश्लेषणका साथ सेयर वजारमा गरिएको लगानीले तपाईलाई कालान्तरमा वैशाखीको काम गर्ने कुरामा दुईमत हुनेछैन । आजको सेयर बजारको लगानीले बुढेसकालको बसीबसी खाने आधार वन्न सक्नेछ ।